Banyere Anyị - Qingdao Topwell Chemical Materials Co., Ltd.
Qingdao Topwell Chemical Akụrụngwa Co., Ltd. guzosie ike na 2014, bụ ọkachamara soplaya aku nnyocha, ire na ahaziri pụrụ iche ink na e ji esiji ákwà nke na mmekọrịta dị iche iche nke light- UV ìhè, nso infrared ìhè (IR), anya ìhè.
Ngwaahịa anyị gụnyere,
1. UV / IR fluorescent pigment na dai,
2. Na nso infrared na-adọrọ adọrọ
3. Photochromic dai na ink,
4. Visible dai
5. Ihe na-acha Thermochromic.
Anyị na-enye ma na-ahaziri ihe ndị a na agba, ihe osise foto maka oghere anya na windo ma ọ bụ ihe nkiri ụgbọ ala, akwa akwa akwa maka ihe nkiri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na akụkụ ụgbọ ala pụrụ iche, obere mkpịsị aka UV na-acha ọkụ ọkụ na ụcha IR maka nchekwa na-ebi akwụkwọ nchekwa, na nso infrared na-adọrọ adọrọ. , na-acha anụnụ anụnụ na-acha ọkụ na-acha ọkụ, na-achacha edozi, kemịkalụ kemịkalụ, ihe eji arụ ọrụ arụ, dyes
Ihe kachasị mkpa, anyị na-ebute ọtụtụ kemịkal dị iche iche na ọpụrụiche pụrụ iche ahaziri nhazi na ọrụ njikọ, ebe nzuzo nzuzo maka ndị ahịa.
Ngwaahịa anyị na-ere nke ọma na USA, Germany, France, Brazil, Japan, na obodo ma ọ bụ mpaghara ndị ọzọ. Anyị bụ ndị a ma ama maka mma dị elu, ọnụahịa asọmpi, ọrụ aka nke klaasị mbụ, ngwugwu nchekwa, yana nnyefe ọsọ ọsọ.
Anyị ji obi anyị na-anabata ndị enyi si n'akụkụ ụwa niile ịbịa leta ụlọ ọrụ anyị ma kwado anyị na ndabere nke uru ogologo oge.